Kuisa mumitsara ine hunhu: Une chokwadi chekuti uri kuishandisa zvakanaka?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Dec 10, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Hoping…: Chiremerera fomu pakupera kwehunyanzvi email yekutarisira
Polite mafomula anozivikanwa mundima yekutonga uye munyika yehunyanzvi. Zvakadaro, dzimwe nguva tinofunga kuti tine fomula chaiyo uye tinoishandisa mune ese aya tsamba dzehunyanzvi, kunze kwekunge ine zvimwe zvikanganiso zve syntax. Izvi zvakapararira uye kana tikasangwarira, vanoisa panjodzi yekuzvidza mutumi. Iwe uchaona mune ino chinyorwa, kushandiswa kwakakodzera kunofanirwa kuita kwechimiro chekuremekedza "Hoping ...". Izvi zvinodzivirira mari yekushandisa zvisina musoro.
Chirevo chekuremekedza "Kutarisira ...": Dzivisa kupokana
Kupedzisa a tsamba nyanzvi, vanhu vazhinji vanoshandisa mafomula ane hunhu akadai sekuti: "Ndinovimba kunzwa kubva kwamuri, ndapota gamuchirai kutaura kwekutenda kwangu kwakadzama" kana "Mutariro yekuti chikumbiro changu chichabata pfungwa dzenyu, gamuchirai kutaura kwekunaka kwangu".
Aya mazwi asina kunaka ehuremekedzo anofanira kunge akapinda mune imwe yemaemail ako ehunyanzvi.
Sei magadzirirwo aya asina kunaka?
Nekutanga fomura yako ine ruremekedzo pakupera kweemail ne "Hoping ...", iwe uchatendeukira kune affixation. Saka nekudaro, zvinoenderana nemirairo yesyntax yemutauro wechiFrench, ndicho chidzidzo chinofanira kutevedzera boka remazwi akaiswa. Chero imwe nzira yekuenderera nayo haina kunaka.
Chokwadi, kana iwe uchiti "Ndichitarisira kunzwa kubva kwauri, ndapota gamuchira ...", iyo apposition haina hukama kune chero chidzidzo. Uye kana tichifanira kutsvaga imwe, isu pamwe tinofunga nezvemunyori. Zvinova zvinopokana.
Izvi zvinotsanangurwa neidi rokuti kuumbwa kwetsika kwakadaro kunoita kuti munhu atende kuti mutori wenhau kana kuti mugamuchiri anenge akamirira kana kuti ane tariro yokuva nenhau, izvo zvinopesana nepfungwa.
Ndeipi fomula yakanyatsokodzera?
Asi, mutsara weruremekedzo ndewekuti: "Ndichitarisira kunzwa kubva kwauri, ndapota gamuchira kutaura kwekutenda kwangu kwakadzama" kana "Mutariro yekuti chikumbiro changu chichabata pfungwa dzako, ndapota.
Mukuwedzera, kupedzisa email yenyanzvi, kune zvimwe zvikanganiso zvekudzivisa. Paunenge uchishandisa izwi rechiito, namata mumunhu wekutanga mumwechete, nyora kuti "Ndinokukumbira" uye kwete "Ndakakutora". Iri boka remazwi rekupedzisira rinodyidzana nezwi rechiito rekuti "Tora" iro risina chekuita nemutsara wekuremekedza uyu.
Kuziva aya nuances echiperengo uye mimwe mitemo yesyntax kwakakosha, kunyanya munyika yehunyanzvi. Zvikanganiso zvakaita seizvi zvinowanikwa mutsamba zvinogona kuuraya uye kushanda pauri. Saizvozvo muvatengi kana hukama hwevatengesi.
Kuisa mumitsara ine hunhu: Une chokwadi chekuti uri kuishandisa zvakanaka? January 7th, 2022Tranquillus
pashureIyo yakapfava fomula yekushandisa napurofesa kana mudzidzisi
zvinoteveraIyo International Aid Factory
Kupera kwetsamba, maitiro ane hunhu ekusiya